Pamusoro Pembokodo - Imbokodo
Chii chononzi Imbokodo
Imbokodo itsvakurudzo huru yekuratidza hunyanzvi iri kuongorora musanganiswa yemishonga miviri yeongororo yekudzivirira chirwere che HIV. Mishonga yetsvakurudzo inonzi Ad26.Mos4.hiv(Ad26 vaccine) neClade C gp140(protein vaccine). Donzvo guru retsvakurudzo ino nderekuona:
Mishonga yekudziriira zvirwere ungadziirira utachiona hwe HIV here?
Mishonga yekudzivirira zvirwere haina njodzi here ikapihwa kuvanhu?
Immune system yevanhu inodavira here kumishonga yekudzivirira zvirwere yetsvakurudzo?
Mishonga yekudzivirira zvirwere iri kuongororwa mutsvakurudzo ino HAIKWANISI kukonzera hutachiona hweHIV kana AIDS. Haigadzirwi neHIV mhenyu, HIV yakaurayiwa, kana zvidimbu zvakabviswa paHIV, kana macells evanhu vane utachiona hweHIV. Zvakagadzirwa nezvigadzirwa zvisiri zvechokwadi zveHIV saka naizvozvo hazvingakonzeri utachiona hweHIV kana AIDS.
Mishonga iyi yekudzivira zvirwere ichiri kuongororwa. Izvi zvinoreva kuti tichiri kuiongorora nekuramba tichidzidza kuti haina njodzi kushandisa muvanhu nekuti inodzivirira HIV here.
Mishonga yekudzivirira zvirwere iyi inoshandiswa mutsvakurudzo chete. Haiwanikwe kune veruzhinji uye haitengeswi. Mishonga yekudzivirira zvirwere inopihwa nevagadziri vayo, Janssen Vaccines& Prevention B.V chikamu cheveJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
Ndiudzei zvakawanda nezve Imbokodo
Imbokodo itsvakurudzo huru inechinagwa chekuratidza kuti mishonga yekudzivirira zvirwere inodzivirira madzimai muSub-Saharan Africa kubva kuhutachiona hweHIV. Kana Imbokodo ikaratidza kuti mishonga yekudzivirira zvirwere inoshanda kumadzimai muSub-Saharan Africa, ringava danho rakakosha munzira yekutsvaga mishonga yekudzivirira zvirwere isina njodzi uye inoshanda kudzivirira vanhu pasi rose kubva kuHIV.
Imwe tsvakurudzo hombe yakaitwa muna 2009, yakaratidza pakutanga kuti mushonga wekudzivirira zvirwere ungango dzivirira HIV, kunyangwe zvavo zviri pakati napakati. Tsvakurudzo iyi yainzi RV144 uye yakaitwa kuThailand nevanhu vanopfuura 16 000. Zvakabuda zvaifadza, uye zvakaratidza kuti mushonga wekudzivirira zvirwere wakadzivirira zvikamu 31.2 kubva muzana pakubatira hutachiwana hutsva hweHIV. Izvi zvinoreva kuti mishonga yetsvakurudzo inodzivirira zvirwere yakashandiswa mu RV144 yakakwanisa kudzivirira angangoita munhu mumwechete muvanhu vatatu vakapihwa mishonga inodzivirira zvirwere yetsvakurudzo. Kunyangwe zvavo izvi zvanga zvisina kukwana kuti mushonga upihwe rezinesi (license) rekuti ushande kuruzhinji, tsvakurudzo yakapa vaongorori zviratidzo neumboo hwavaida kuti vagadzire mishonga yekudzivirira zvirwere iri nani. Mishonga yekudzivirira zvirwere iri kuongororwa muImbokodo yakasiyana neye mutsvakurudzo yeRV144.
Mishonga yekudzivirira zvirwere iri kushandiswa mu Imbokodo, neimwe mishonga yekudzivirira zvirwere yakafanana, yakaongororwa mune dzimwe tsvakurudzo diki dzakawanda. Imwe yetsvakurudzo idzi inozivikanwa nekunzi Approach, inoshandisa mushonga wakafanana wekudzivirirwa zvirwere weAD26 neprotein vaccine yeImbokodo uye irikuitwa KuUS, Rwanda, Uganda, South Africa neThailand. Mishonga inodzivirira zvirwere ye AD26 neprotein vaccine inoshandiswa muImbokodo irikupihwawo zvekare kuvanhu 235 mutsvakurudzo mbiri kuUS, Kenya neRwanda dzinonzi HVTN 117(Traverse) ne HVTN 118 (Ascent). Traverse ne Ascent itsvakurudzo dzedanho rekutanga umo vaongorori vanoda kudzidza kana Ad26 nemishonga inodzivirira zvirwere yeprotein (mishonga indodzivirira zvirwere imwechete inoshandiswa muImbokodo) isina njodzi kupa kuvanhu; kana vanhu vachikwanisa kutora mishonga unodzivirira zvirwere vasina kusagadzikana kwakanyanya; uye kuti maimmune system evanhu anodavira sei kuAD26 nemishonga unodzivirira zvirwere weprotein. Zvekutanga zvakabuda mutsvakurudzo yeTraverse nemutsvakurudzo yeApproach zvadomwa kumusoro, zvakaratidza kuti mishonga inodzivirira zvirwere iyi haina njodzi kupa kuvanhu uye yakapa kudaira kwakanaka kuimmune system.
Mutsvakurudzo dzaitwa kusvika parinhasi, hapana kuva nematambudziko akanyanya kuhutano maererano nemishonga inodzivirira zvirwere iyi. Zvakadaro panogara pane mukana wematambudziko asati aonekwa. Ndosaka rimwe redonzvo retsvakurudzo iyi kutsvaga kuti mishonga inodzivirira zvirwere hainanjodzi ikapihwa kuvanhu. Hutano hweumwe neumwe anopinda mutsvakurudzo huchacherechedzwa zvakanyanya munguva yese yetsvakurudzo.
Imbokodo inosiyana netsvakurudzo diki pakuti, muImbokodo, vaongorori vave kutsvaga kudzidza kuti AD26 nemushonga unodzivirra zvirwere weprotein ungadzivirira zvechokwadi here utachiona hweHIV.
Ndiani arikuita tsvakurudzo
Tsvakurudzo iri kuitwa neHVTN, Janssen Vaccines & Prevention B.V, chikamu cheveJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson nemakiriniki ese arikuita tsvakurudzo. Mapoka aya arikushanda pamwechete nenhengo dzemunharaunda kuitira kuti tsvakurudzo igamuchirike kuvagari vemunharaunda uye inoremekedza tsika dzemunzvimbo.